न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ शुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् – mero sathi tv
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ शुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस्
On २९ चैत्र २०७४, बिहीबार १७:११
अमेरिकन डाईबेटिज एसोसियसन (एडीए) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डव्लुएचओ) का अनुसार मधुमेह रोग पछिल्लो दुई शताब्दीदेखि बढ्दो क्रममा छ । सन् १८९५ मा मधुमेह रोगीको सङ्ख्या विश्वमा ३ करोड जति थियो भने त्यो सङ्ख्या बढेर सन् २०१३ सम्म आईपुग्दा ३८ करोड भन्दामाथि आइपुगेको छ । यो सङ्ख्या सन् २०३५ मा बढेर लगभग ६० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
शुगरको रोगले पिडित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुस ! हाम्रै घर वरिपरि पाइने यी पातको प्रयोगले तपाइलाई शुगर रोगबाट मुक्त बनाउन पूर्ण मद्दत गर्नेछ। कसरि प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका जान्न तल दिएको भिडियो हेर्नुहोस:
आमा ठूलो कि अमेरीका ठूलो ? मदनकृष्णको प्रश्न छोरा यमनलाई ! आयो यस्तो जवाफ (भिडियो)
बन्दाकोबीको यि फाइदाहरु तपाईहरुलाई थाहा नहुनसक्छ